Mini danpon tamin'ny laser, Shanghai maitso Module, Laser Module - Jiabei
Fitaovana JIABEI Shanghai ORINASA naorina tamin'ny 2003, dia tafiditra toeram-piasana ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana sy ny fivarotana ny vokatra ho an'ny tany tamin'ny laser orinasa fanadihadiana. Ny vokatra tamin'ny laser dia ahitana ambaratonga, tamin'ny laser Modules, tamin'ny laser sahaza ary ny sasany hafa mifandray Accessories amin'ny fanorenana. Any tao an-tanànan'i Shanghai maoderina izay koa dia iray amin'ireo tsara indrindra sy manam-pahefana tanàna any Shina.
Featured entana Featured entana
VH-525 Green 5-dalana,
VH-3D Green 12-dalana, pejy 360 ° mitsangana & Horiz ...
VH-30G Mini Green One mitsangana-dalana,
VH-30R Mini Red One mitsangana-dalana,
vaovao farany vaovao farany
Inona avy ireo karazana fanahy haavon'ny
1 .. Fisokajiana araka ny fiàsan'ny fitsipika (1) ny fanahy Mechanical haavon'ny ambaratonga Mechanical dia azo zaraina ho telo karazana: barany anivon'ny (fantatra koa amin'ny hoe fitter haavon'ny), rafitra sy ny vondrona anivon'ny ambaratonga. Izy ireo asehon'ny ambaratonga fefy, ka milina ambaratonga antsoina koa hoe anivon'ny ambaratonga na karazana fefy. Fanahy ambaratonga. Ny Fanahy esory ambaratonga dia mahitsizoro anivon'ny fitaovana fandrefesana amin'ny lehilahy iray tena ratsy handrefesana ambonin'ny, ary ny ambaratonga tafatoetra fefy, na azo nanitsy mikasika ny tena ratsy mirefy surfa ...
Ny ambaratonga fantsona ny fanahy na ny fanaka haavon'ny fitaratra. Ny rindrina anatiny ny ambaratonga fantsona dia curved ambonin'ny amin'ny iray nipoaka ny curvature. Ny fantsona misy rano. Raha ny ambaratonga dia mitongilana, ireo ka manjary miboiboika ao amin'ny sehatra Tube nifindra tany amin'ny faran'ny ny haavon'ny mba hamaritana ny haavon'ny toerana. Ny lehibe kokoa ny nipoaka ny curvature ny rindrina anatiny ny Fanahy anivon'ny, ny ambony ny vahaolana, ary ny kely kokoa ny nipoaka ny curvature, ambany ny fanapahan-kevitra. Noho izany, ny nipoaka ny curvature ny S ...
Inona avy ireo fomba fisafoana ny sehatra?
Ny ambaratonga famarana mahazatra dia fitaovana fandrefesana fijery kely. Ao amin'ny milina sy ny fitaovana orinasa orinasa mpamokatra entana, dia ampiasaina mba handrefesana ny fironana Angle mikasika ny marindrano toerana, ny planeness straightness ny mpitari-dalana sy ny lalamby ny milina fitaovana fitaovana, ny toerana marindrano sy mitsangana toerana fametrahana ny fitaovana, sns Next: Mety Aho manazava ny fahalalana ny haavon'ny amin'ny an-tsipiriany. 1. Ny teny fampidirana fohy ny ambaratonga A haavon'ny famarana mahazatra dia fitaovana fandrefesana kely ...
mpandray , Total Station , 360 Rotary Laser Level Green Tara , Tripod , Wall Bracket , Laser Light ,